Famokarana sy famokarana masomboly - magazine "Potato System"
Tena LOHATENY Digest siansa Famokarana sy famokarana masomboly
Ireo mpikambana ao amin'ny Scottish National Party (SNP) dia niantso ny governemanta UK sy ny Vondrona Eoropeana amin'ny andaniny sy ny ankilany mba hanesorana ireo sakana amin'ny...
Ny orinasa alemà Kaufland dia namoaka ovy misy votoaty karbôgria ambany - 30% latsaka noho ny salan'isa ho an'ny karazany. Variety vaovao...
Hanomboka amin'ny volana febroary ny fampianarana momba ny fifantenana sy ny famokarana masomboly ovy ao amin'ny Oniversiten'ny Agrarian State Michurinsky
Ny Oniversiten'ny Agrarian ao amin'ny Faritra Tambov dia manangana taranja fanofanana matihanina amin'ny fiompiana ovy sy ny famokarana voa. Michurinsk State Agrarian University miaraka amin'ny fanohanan'ny Federal Research...
KOLOMENSKOYE SEMENA fampiasam-bola amin'ny kalitao dia mahazo tombony!
Kolomna Seeds LLC dia toeram-pambolena voa manokana amin'ny fambolena ovy voa voalohany sy elite. Ny orinasa dia ao amin'ny distrikan'i Kolomensky ao amin'ny faritr'i Moskoa.
HYBRIDS KAROTSA azo antoka
CARROT KURODA SILVANO F1 Taham-pamokarana sy kalitao tsara indrindra • Vanim-potoan'ny zava-maniry: 110–120 andro • Fakan-kazo miendrika cone, miboridana. Ny loko dia voasary mamiratra...
LLC "MOLYANOV AGRO GROUP": NY FAhombiazan'ny mpanjifantsika no fahombiazanay
Tamin'ny 13 Oktobra 2021, ny orinasa Molyanov Agro Group, fantatra tsara amin'ny tsena Rosiana ho mpamokatra ovy voa ho an'ny elite sy ny fananahana ...
Ny tantsaha Azerbaijani dia tsy manana ovy voa amin'ny karazana an-trano
Lasa olana lehibe ho an'ny tantsaha any Azerbaijan ny tsy fahampian'ny masomboly ovy eto an-toerana, hoy ny tatitry ny Sputnik Azerbaijan. Tantsaha mirotsaka amin’ny...
Tetikasa goavana amin'ny famokarana ovy voa no apetraka ao Ozbekistan
Ny Masoivohon'ny Repoblika Uzbekistan any Polonina dia nanao fihaonambe video niaraka tamin'ny fandraisan'anjaran'ny mpitarika ny khokimiyat ao amin'ny faritra Kashkadarya sy ny Antenimieran'ny varotra Polonina-Uzbekistan, nandritra izany ...
Fambolena voa ovy - fomba fampandrosoana vaovao
Ny iray amin'ireo asa lehibe amin'ny fampivoarana ny fambolena legioma sy ny ovy mitombo ao Rosia mandritra ny taona vitsivitsy dia ny fanamafisan'ny karazana ovy amin'ny fifantenana an-trano ...
P. 1 amin'ny 5 1 2 ... 5 Next.
Ny fitantanana ny toeram-pambolena paty ao amin'ny faritra Sverdlovsk
Ny fijinjana ovy dia fotoana avo telo heny noho ny tamin'ny taona lasa tany EAO